China D-Panthenol mveliso kunye nabenzi | Y & R
I-D-Panthenol lulwelo olucacileyo olunyibilikayo emanzini, imethanol, kunye neethanol. It has a livumba uphawu kunye incasa krakra kancinane. I-D-Panthenol ngumthombo wevithamini B5 kwaye isetyenziswa njengesongezo sesondlo kunye nesongezelelo.
I-D-Panthenol sisixhobo esisebenzayo ekunyamekeleni ulusu olunobunkunkqele kunye neemveliso zokhathalelo lweenwele. Iphucula ukubonakala kwesikhumba, iinwele kunye neenzipho. Inika ukuthambisa kunye neenzuzo zokuchasana nolusu kunye nokuphucula ukukhanya, kuthintela ukonakala kunye nokuthambisa iinwele.
Igama lemveliso: I-D-Panthenol
Ikhowudi yemveliso: YNR-DP100
Igama le-INCI: Panthenol
Izithethantonye: IPanthenol, iDexpanthenol
Inombolo ye-CAS: 81-13-0
Ifomula yeMolekyuli: C9H19NO4
I-D-Panthenol is a viscous fluid derivative of pantothenic acid and has been specially developed for applications.
Iiparamitha zoBuchule eziPhambili:
Ukuchonga uA Ngqinelana USP
Isazisi B Ngqinelana USP
Isazisi C Ngqinelana USP
Inkangeleko Ulwelo olungenambala, olubonakalayo nolucacileyo
Uvavanyo (Isiseko esingenamanzi) 98.0% ~ 102.0%
Ujikelezo oluthile loMkhanya +29°~ + 31.5°
Umda we-Aminopropanol Hayi ngaphezulu kwe-1.0%
Hlala kuCinezelo Hayi ngaphezulu kwe-0.1%
Isalathiso sokuKhanya (20 ℃) I-1.495 ~ 1.502
Amatye anzima Hayi ngaphezulu kwe-20 ppm
I-D-PANTHENOL sisiseko esine-viscous fluid se-pantothenic acid kwaye yenziwe ngokukodwa ukuba isetyenziswe kwimixholo ephezulu, ifomu yotywala ingena ngokulula kulusu, iinwele kunye neenzipho zeminwe .. I-D-PANTHENOL ithathwa njengeyona nto isebenzayo kwizithambiso ngenxa Iipropati ze-physio-chemical kwi:
* Ingena nzulu eluswini
* Ukubopha amanzi kunye / okanye ukugcinwa kwamanzi
* Ukuguqulwa ube yi-pantothenic acid eluswini nasezinweleni emva kolawulo lwengxoxo ngokudala imisebenzi ye-pro-vithamini B5.
I-D-PANTHENOL inokuthathwa njengeyona nto ifanelekileyo yokuthambisa enokuphucula ukhathalelo lolusu kunye neenwele kunye nokukhusela kuxinzelelo lwendalo. Izenzo ze-cosmetological ze-D-PANTHENOL zisekwe kwiziphumo ezilandelayo:
Ukuphuculwa kwemisebenzi ye-mitotic (ukuvuselelwa kweseli)
* Ukukhawulezisa i-epithelisation kunye ne-granulation emva kokutsha, i-eczemas ulcerations, i-radiotherapy kunye notyando lweplastiki.
* Ukuphucula iimpawu zokudumba.
Ukomeleza iingcambu zeenwele kunye nemiphini yeenwele.
* Ukukhuselwa kwi-ammonia evelise irhashalala.
Egqithileyo IKojic Acid
Okulandelayo: ICarbomer 941